July Dream: My recent viewpoint
Posted by JulyDream at 6:18 PM
BeaWorld Changer ! Cheer!
ပြောသွားတယ်။ သူ့ဘလောဂ့် အဟောင်းတွေ
တက်တော့လည်း ရေးရချည်သေးရဲ့ ဘယ်သူ
ဒို့များက အကောင်းမြင်ဝါဒ.. ဘာမှကျောဘူး..
........ လူ့ဂွစာ.. ဂျစ်ပစီ ..... လူပြိုရီးးးး
လက်ရှိအမြင်က အဟောင်းတွေ မဖြစ်ရဘူးလို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိဘူးထင်တယ်။ တချို့ အမြင်တွေက လူမှန်း သိကာစကနေ သေသည့်တိုင်အောင် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော် အမြင်တွေလည်း ဒီနှစ် အပိုင်းအခြားလေးမှာ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကိုဂျူလိုင်ရဲ့ ၀ါသနာက ကွက်လပ်ဖြည့်တာဆိုတော့ .. ကွက်လပ်ကလေးတွေ ရှာပေးမယ်နော်..း)
ရေးချက်ကတော့ လန်းတယ် ။
ငါရေးပြီးပြီ။ နောက်တစ်ခါ မtag နဲ့။ ဒါပဲ။
တော်တော်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပေးထားတာပဲ..
previous posts တွေကိုတောင် reference ပြန်ညွှန်းထားသေးတယ်.. ဖတ်ရတာ စုံလင်ပါ့..
တွေးစရာလေးတွေ ထည့်ရေးထားတာလေး ကောင်းတယ်ဗျာ.......
ရှေ့ပိုင်းပို့စ်တွေကို အခုလိုပြန်ချိ်တ်ပေးထားတော့ အားလုံးကို တစုတစည်းတည်း ဖတ်ရတာပေါ့။ အရာရာကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်တတ်ပုံပဲ။
0707 ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြန် Tag ထားတာလဲ ၇ ယောက် တိတိပါပဲလားဗျ။
အိုးဂေါ့ ဂျူလိုင်တို့ မားကတ်တင်းကောင်းချက်ကတော့ လန်ထွက်
ဒီတစ်ပို့စ်ထဲနဲ့တင် ပြန်လိုက်ဖတ်ရမဲ့သူ့ပို့စ်တွေက တစ်ရက်လုံးဘယ်မှမသွားပဲ မစားပဲ ထိုင်ဖတ်မှ ရမယ်ထင်ရဲ့ အဟိဟိ :)
ကွက်လပ်တွေက ကျွန်တော်တို့ အနားတ၀ိုက်မှာတင် ရှိပါတယ်။ တကူးတက ရှာစရာ မလိုပါဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကွက်လပ်လေးတွေ နိုင်သလောက်လေး ဖြည့်ကြရအောင်ဗျို့။
ကိုဝါဆို ရေးချက်တွေက မလန်းပါဘူးဗျာ။ ပုံမှန်ပါပဲဗျ။ အရမ်း မမြှောက်ပါနဲ့ဗျို့။ တော်ကြာ အပေါ်ကနေ ပြန်ကျမလာပဲ နေအုံးမယ်။
ရေးပြီးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ နောင်လည်း အဆင်ပြေရင် ပြေသလို Tag ပါအုံးမယ်။
ရေးမယ့်ရေး... အခုလို ရေးပေးမှ Tag တဲ့လူကို လေးစားရာ ရောက်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် အခုလိုလေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပေးလိုက်တာပါ။ ကျုပ်က ရစ်တာ ကြောက်တတ်တယ်လေ။
ခွိခွိခွိ နဲ့ တကယ် တက်နေပြီလား ခင်ဗျ။
တွေးစရာလေးတွေကို ပြန်လည် တူးဆွမိတာပါ။ လတ်တလော အကြိုက်တွေ အမြင်တွေက အရင်က အကြိုက်တွေ အမြင်တွေအတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ တည်ရှိနေသေးတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ပြောင်းလဲမလဲ ဆိုတာကတော့... မျှော်...
ဒီလိုပါပဲ Tag လိုက်တာ ၇ ယောက် ဖြစ်သွားတယ်။ မေးကြည့်တော့ အချိန်ရရင် ရေးပေးမယ်ဆိုတော့လည်း Tag လိုက်တာပါ ခင်ဗျ။
မားကတ်တင်း မကောင်းပါဘူး ဗျာ။ မားကတ်တင်း ကောင်းရင် အရောင်းစွံတာ ကြာလှပေါ့။ အဟက်... လင့်ခ်ထားတဲ့ ပို့စ်အားလုံးကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ အပြီး ထိုင်ဖတ်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ရတော့မှာပေါ့။ ချီးမြှင့်အားပေးမှုက ပြိုင်စံရှား ဗိုလ်စွဲလောက်နိုင်တယ်လေ။
ဇူလိုင်ထဲက အကိုကြီးတို့များ အခုထက်ထိပေါလို့ကောင်းတုန်းပဲနော်... သွပ် သွပ်
လက်စသတ်တော့ ငါ့အဖိုးက ဂလိုကိုး